सावधान ! के तपाईलाई विदेशबाट फेसबुक र इमेलमा म्यासेज आउँछ ? – Lokpati.com
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड नेपाल प्रहरी नेपाली काँग्रेस मृत्यु केपी शर्मा ओली प्रचण्ड अमेरिका पक्राउ प्रधानमन्त्री चितवन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अपराध नेकपा सरकार राशिफल
सावधान ! के तपाईलाई विदेशबाट फेसबुक र इमेलमा म्यासेज आउँछ ?
काठमाडौं। के तपाईंको फेसबुकमा विदेशीहरुको फ्रेन्ड रिक्वेष्ट आउने गरेको छ ? यदी आएको छ भने सतर्क हुनुहोस्। किनभने धेरै नेपालीहरु यस्ता कुराहरुमा अल्झेर निकै पैसा गुमाएका छन्। निकै सरल र उत्साहजनक मेसेज पठाएर दोस्ती घना बनाँउदै उनीहरुले यसरी पैसाको लालच देखाएर कुरा गर्दछन्।
तिम्रो प्रोफाइल राम्रो लाग्यो, म साथी बन्न चाहन्छु, म संग यति पैसा छ र यहाँ बिभिन्न बैकिंगं कठिनाईले तिमीलाई पठाउन चाहन्छु लगायत दुरुस्त सहि मेसेजहरु आउने गर्दछन्। उनीहरुको प्रोफाइल पनि निकै दमदार र वास्तविक लाग्ने खाले हुन्छन्। आजभोली त विदेशका विभिन्न ठाँउमा बसेर नेपालीहरुको गिरोहले यस्ता ठगिमा संलग्न भएको पाइएको छ।
पैसाको कुरामा सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएपछि उनीहरु केहि सामान भन्सारमा अड्केको बताँउदछन्। यसरी करोडौं मुल्यको पैसा र सामान भारतमा अड्केको र भन्सारलाई आयात कर तिर्नुपर्ने बताएपछि उनीहरुले बताएको खातामा धेरै नेपालीहरुले पैसा पनि जम्मा गरेका छन्। यसरी पैसा जम्मा भएपछि ति प्रयोगकर्ताहरु र फोनकल एका एक हराँउदछ, यस्तो ठगिमा निकै दिग्गज नेपाली प्रयोगकर्ताहरु फसेका धेरै उदहारणहरु हुन्छ।
पैसोको कुरा गर्दा आफूलाई अप्ठेरो हुने र गोपनीयता अरुलाई भनेंर हनन् नगर्न उनीहरुले अनुरोध गर्दछन् र यस्ले गर्दा यस्ता कुराहरु समयमा नै धेरैलाई थाहै हुँदैन्। छोटो समयमा धेरै पैसा कमाउने उदेश्यले यो लालसा पछि घाटामा परिणत होला है।
यो दोश्रो उपायमा सर्वप्रथम तपाँइहरुको साथी बनेर उक्त विदेशी प्रयोगकर्ताले तपाँइको एकाउन्टका धेरै जसो प्रयोगकर्तालाई तपाँइलाई थाहै नहुने गरि तपाँइकै फोटो हालेर अर्को यूजर बनाई रिक्वेष्ट पठाँउदछन्। अनि पछि तपाँइकै नाम गरेर आफू विदेशको कुनै ठाँउमा कार्ड र पैसा हराएर अलपत्र परेको र केहि पैसा पठाउँनुस भन्ने जीवन रक्षात्मक अनुरोधका साथ मेसेज पठाँउदछन्।
अन्जानमै यहाँका शुभचिन्तकले पैसा पठाइदिएर तपाँइलाई सहयोग गर्न खोज्छन्। ब्यर्थमा ठगिन्छन्। साइबर क्राईम बढ्दो छ र सामाजिक सञ्जालमा यस्ता धेरै ठगिका कुराहरु भइरहेका छन् । आफू सचेत र जागरुक हुन जरुरी छ है। कहिले काँही त तपाँईको इमेल नै ह्याक गरेर पनि यस्ता मेसेजहरु पठाइन्छन्, यो अत्यन्त भयंकर ठगि हो। जथाभावी मेसेज र अन्जान एकाउन्टका साथी बनेंर उनीहरुसंगको मित्रता र पैसाको लालचमा नपरौं।
अंग्रेजी बाेल्दैमा मान्छे जान्ने हुँदैन
तेलकाे मूल्य फेरि बढ्यो